Hepatitis B (အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီ ရောဂါ) - Hello Sayarwon
Hepatitis B (အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီ ရောဂါ)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Hepatitis B (အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီ ရောဂါ)
Hepatitis B (အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီ ရောဂါ) ကဘာလဲ။
အသည်းရောင်အသားဝါဘီရောဂါ သည် ကူးစက်တတ်သောအသည်းရောဂါဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီပိုး (HBV) ကြောင့်ဖြစ်ပွားခြင်း ဖြစ်သည်။ ၎င်းပိုးသည် အသည်းကိုသက်ရောက်မှုရှိစေသော ပိုးများထဲမှ တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ အသည်းရောင်အသားဝါဘီတွင် ပုံစံနှစ်မျိုးရှိ၏။
• ရုတ်တရက် အသည်းရောင်အသားဝါဘီရောဂါ
အချိန်တိုသောရောဂါဖြစ်ပြီး HBV ပိုးနှင့်ထိတွေ့ပြီးနောက် ပထမ ၆ လအတွင်းဖြစ်ပေါ်တတ်သည်။ ဒီရောဂါသည်နာတာရှည်ရောဂါအဖြစ်သို့ပြောင်းသွားနိုင်စွမ်းရှိပါသည်။ အမြဲတမ်းတော့ မဟုတ်ပါ။
• နာတာရှည် အသည်းရောင်အသားဝါဘီရောဂါ
ဒီရောဂါသည် ကာလကြာရှည် ဖြစ်ပွားသောရောဂါဖြစ်ပြီး လူတစ်ယောက်၏ ခန္ဓါကိုယ်၌ ဗိုင်းရပ်ပိုးကျန်ရှိနေသည့်အခါတွင် ဖြစ်ပေါ် တတ်သည်။
Hepatitis B (အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီ ရောဂါ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ရုတ်တရက် အသည်းရောင်အသားဝါဘီသည် အရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင် အဖြစ်များ၏။ နာတာရှည်ရောဂါသည် မွေးကင်းစနှင့် ကလေးများတွင် အရွယ်ရောက်ပြီးသူများထက် ပိုအဖြစ်များသည်။
WHO အချက်အလက်များအရကမ္ဘာတွင် အသည်းရောင်အသားဝါဘီရောဂါရှိသူပေါင်း သန်းနှစ်ထောင်ခန့်ရှိသည်ဟုဆိုသည်။ ထိုအထဲမှ အာရှပစိဖိတ်ဒေသတွင် သန်း ၂၅၀ သောလူများသည် HBV ပိုးနာတာရှည်ကူးစက်မှု ခံစားနေရပါသည်။
Hepatitis B (အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီ ရောဂါ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
အသည်းရောင်အသားဝါဘီကို “တိတ်တဆိတ်လူသတ်သမား”ဟုခေါ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် လူအများစုတွင် လက္ခဏာ မပေါ်တတ်သောကြောင့် ရောဂါတိုးပွားမှုကို နှစ်များစွာကြာသည်အထိမသိနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
• ဝမ်းအရောင်ဖျော့ခြင်းရွှံ့စေးလို ဝမ်းအရောင်များသွားခြင်း
• spider angiomas ဟုခေါ်သောပင့်ကူပုံစံသွေးကြောကွက်များအရေပြားတွင်ပေါ်လာခြင်း
ပြင်းထန်သောရောဂါသည် အသည်းခြောက်ခြင်းကိုဖြစ်စေပြီးရေဖျဉ်းဆွဲခြင်းနှင့် အသည်းပျက်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
အထက်တွင် ဖော်ပြထားသည့်အထဲမှာ မပါဝင်သေးသော အခြားလက္ခဏာများလည်း ရှိနိုင်ပါသေးသည်။ အကယ်၍ ကိုယ့်ဆီတွင် ရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုခုများ ရှိနေမလားဆိုပြီး စိုးရိမ်နေမယ်ဆိုပါက ဆရာဝန်နှင့်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါသည်။
သင့်ဆီမှာအထက်ဖော်ပြပါ ရောဂါလက္ခဏာတွေထဲမှ တစ်ခုခုများရှိနေမယ်ဆိုလျှင် သို့မဟုတ် မေးခွန်းတစ်ခုခုရှိနေမယ်ဆိုလျှင် ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။ လူတိုင်း၏ခန္ဓါကိုယ်တုံ့ပြန်မှုသည် မတူညီနိုင်ပါ။ သင့်အခြေအနေအတွက် ဘာအကောင်းဆုံးလဲဆိုတာကို သင့်ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်တာက အကောင်းဆုံးပါပဲ။
ထို့အပြင် သင်သည် ဘီပိုးနှင့်ထိတွေ့မိလိုက်ပြီဟု ယူဆပါက ဆရာဝန်နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။ ကာကွယ်ကုထုံးကိုပိုးနှင့်ထိပြီး ၂၄ နာရီ အတွင်း ခံယူရရှိပါက ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကို လျှော့ချပေးနိုင်ပါသည်။
Hepatitis B (အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီ ရောဂါ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
အကြောင်းရင်းသည် အသည်းရောင်အသားဝါဘီ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒီဗိုင်းရပ်စ်သည် ရောဂါရှိသောသူနှင့် လိင်ဆက်ဆံလျှင်ကူးတတ်ပြီး မသန့်သည့်ဆေးထိုးအပ်များမှလည်း ကူးနိုင်သည်။ ကူးစက်ထားသောသွေးနှင့် အခြားခန္ဓါကိုယ်မှထွက်သည့် အရည်များ (ဥပမာ – သုက်ရည်၊ မိန်းမကိုယ်အရည်၊ နို့ရည်၊မျက်ရည်၊ တံတွေးနှင့် အနာများမှအရည်များ) မှတစ်ဆင့် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးနိုင်သည်။ ရောဂါပိုးရှိသော ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်မှလဲ ကလေးဆီသို့ကူးစက်နိုင်သည်။
ငါ့ဆီမှာ Hepatitis B (အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီ ရောဂါ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
အသည်းရောင်အသားဝါဘီသည် ကူးစက်ခံထားရသောသူ၏ သွေး၊ သုက်ရည် သို့မဟုတ် ခန္ဓါကိုယ်မှ ထွက်သောအရည်များနှင့်ထိမိလျှင် ကူးစက်နိုင်ပါသည်။ အောက်ပါအကြောင်းအရာများရှိနေလျှင် အသည်းရောင်အသားဝါဘီရောဂါ ကူးစက်ခံရနိုင်ချေ များစေပါတယ်။
• လိင်ဆက်ဆံဖက်များစွာနှင့် (သို့) အသည်းရောင်အသားဝါဘီပိုး ကူးစက်ခံထားရသူနှင့် အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံခြင်း
• အကြောဆေးထိုးရာတွင် အပ်များကိုမျှဝေသုံးစွဲခြင်း
• နာတာရှည်အသည်းရောင်အသားဝါဘီ ရောဂါ ရှိသူနှင့် အတူနေထိုင်ခြင်း
• အသည်းရောင်အသားဝါဘီပိုးရှိသောမိခင်၏ ကလေး
• လူသွေးများနှင့်ထိတွေ့ရသည့်အလုပ် လုပ်နေရခြင်း
• အာဖရိက၊ အာရှအလယ်ပိုင်းနှင့် အရှေ့တောင်အာရှ၊အရှေ့ဥရောပဒေသများကဲ့သို့သောဘီပိုးကူးစက်မှု များသည့်နေရာများသို့ ခရီးသွားခြင်း
အထက်ပါဖြစ်ပွားနိုင်ချေကို မြင့်မားစေသည့်အချက်များမရှိရုံနှင့် သင်ဘီပိုးမကူးစက်တော့ပါဟု ယူဆ၍မရပါ။ ဒီအချက်များသည် ကိုးကားရန်အတွက်သာ ဖြစ်သည်။ အသေးစိတ်သိလိုပါက မိမိ၏ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
Hepatitis B (အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီ ရောဂါ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
သင့်၏ဆရာဝန်သည်သည် သင့်မှာဘီပိုးရှိနေကြောင်းသံသယရှိလျှင် သင့်ကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးပြီးသွေးစစ်ခိုင်းနိုင်ပါသည်။ သွေးစစ်မှုများသည် ခန္ဓါကိုယ်တွင် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရှိမရှိရုတ်တရက်လား၊ နာတာရှည်လားသိရှိနိုင်သည်။ သင့်၏ဆရာဝန်သည် အသည်းမှအသားစကိုယူပြီးအသည်းပျက်စီးမှုရှိမရှိစစ်ဆေးကောင်းစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ ဒီစစ်ဆေးမှုတွင် ဆရာဝန်က အပ်နှင့်အရေပြားကိုဖောက်ပြီးအသည်းဆီသို့ချိန်ကာအသားစယူပြီနောက် ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်ရန် ပို့ပါလိမ့်မည်။
Hepatitis B (အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီ ရောဂါ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ဘီပိုးနှင့်ထိတွေ့မိသည်ကိုသိသည်နှင့် ဆရာဝန်ဆီချက်ချင်းသွားပါ။ သင်ကာကွယ်ဆေးမထိုးရသေးလျှင်၊ ထိုးထားလားမသေချာလျှင် (သို့)ကာကွယ်ဆေးကိုတုံ့ပြန်မှုမပြသေးလျှင် ဘီပိုးခုခံဆေး (hepatitis B immunoglobulin)ကို ဗိုင်းရပ်စ်နှင့်ထိပြီး ၁၂ နာရီအတွင်းထိုးပါက အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။ ထိုအချိန်၌ သင်ဆေးမထိုးထားလျှင် ရုတ်တရက် (သို့)နာတာရှည် အသည်းရောင်အသားဝါဘီရောဂါ ဖြစ်ပွားနိုင်ပါသည်။ သင်ကူးစက်ခံရသောပုံစံပေါ်မူတည်ပြီးကုသမှုများရှိပါသည်။
Hepatitis B. (2008, August). World Health
Organization. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs204/en/. Access date July 24, 2016.
Hepatitis B. (2011, February 23). Canadian Centre for Occupational Health and Safety. http://www.ccohs.ca/oshanswers/diseases/hepatitis_b.html. Access date July 24, 2016.
Hepatitis B Vaccine. (n.d.). Centers for Disease Control and
Prevention. http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/vis/downloads/vis-hep- b.pdf. Access date July 24,
(n.d.). KidsHealth.org. http://kidshealth.org/teen/sexual_health/stds/std_hepatitis.html. Access
date July 24, 2016.Ferri, Fred. Ferri’s Netter Patient Advisor. Philadelphia, PA: Saunders / Elsevier, 2012. Print.
date July 24, 2016.